Igbo, John: Lesson 052 - Echiche di iche iche banyere Jisos n'etiti ndi mmadu na ndi isi ochichi (Jọn 7:14-53) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 052 (Disparate views on Jesus)
37 Ma n'ubọchi ikpe-azu nke ubọchi ahu, Jisus we guzo, tie nkpu, si, Ọ buru na akpiri nākpọ ya nku, ya biakutem ṅua. 38 Onye kwere na Mu, dika ihe edeworo n'akwukwọ nsọ si puta, miri nke miri di ndu gēsi nime ya puta.
N'oge oriri ahụ, Jizọs kwusara ozi ọma nye ìgwè mmadụ nọ n'ụlọikpe ụlọ nsọ ahụ. Ha na-echere nnukwu onye nchụàjà ka ha wụsa mmiri n'elu ebe ịchụàjà. Ndi nchu aja ji obi uto bia ma jiri obi uto duputa mmiri ahu n'iru Chineke, onyinye ekele, ihe nnochi nke nghota ha nacho n'aka Onye Okike maka afo abia. Ha kwadoro ọdịnala a n'okwu Aịsaịa, "Ha ga-eji mmiri na-ese mmiri site na isi iyi nke nzọpụta."
Jizọs hụrụ mmiri na-agụ mkpụrụ obi ndị na n'agbanyeghị niile ememe amaghị nzọpụta. Jizos tikuru ndi ah nke náeche anya,, "Biakutem, ṅua miri nke ndu: ka onye obula nke agu gua biakutem, abum isi iyi ndu."
Ndị na-achọghị ndụ Chineke agaghị abịakwute Onye Nzọpụta. Ma nye ndị na-agakwuru ya, Jizọs sịrị, "Onye ọ bụla nke kwere na m, nke mụ na ya na-esokwa ghọọ isi iyi nke ngọzi nye ọtụtụ ndị. Akwụkwọ Nsọ na-agba gị ume inwe okwukwe na m, Chineke na-enye gị iwu ịbịakwute m wee chọta ndụ na ọṅụ. "Onye ọ bụla nke ji obi ike bịaruo Jizọs nso ma ṅụọ ihe o kwuru ma jupụta na mmụọ ya na-agbanwe. Onye akpiri nākpọ nku nāghọ miri; onye na-eme ego na-aghọ onye ohu kwesịrị ntụkwasị obi.
Ị hụla nlekọta nduzi nke Jizọs? Ọ chọrọ ka ị bụrụ ezigbo mmiri. Obi abụọ adịghị ya na obi gị na-eweta echiche ọjọọ, mana Jizọs nwere ike ime ka obi gị na ọnụ gị dị ọcha ka ị wee bụrụ ihe na-eweta ngọzi nye ọtụtụ.
Nzube Jizọs abụghị naanị ịchacha uche na mkpụrụ obi kamakwa ahụ gị, ka i wee ghọọ àjà dị ndụ nke Chineke na-anakwere, na-eje ozi nke furu efu. Ọ na-ezube ido nsọ gị dum, ka i wee ghara ịdị ndụ ọzọ maka onwe gị, kama jiri ike gị na-ejere ndị ọzọ ozi n'efu. Onye obula nke neme onwe ya nye Jisos gabu otutu ndi madu.
39 Ma nka ka O kwuru bayere Mọ Nsọ, nke ndi kwere na Ya gānata. N'ihi na e nyebeghị Mmụọ Nsọ, n'ihi na e mebeghị ka Jizọs dị ebube.
Onye kwere na Jizos nata onyinye nke Mmo Nso. Mkpụrụ nke Mmụọ na mmadụ bụ ọrụ ebube nke ọgbọ anyị, n'ihi na anyị ka nọ na oge nke Mmụọ Nsọ. Ọ bụghị naanị mmụọ ozi ma ọ bụ ihu igwe, kama Chineke n'onwe Ya, jupụtara n'ịdị nsọ na ịhụnanya. Mmụọ dị ka ọkụ ọkụ na ike dị ugbu a. N'otu oge ahụ ọ bụ Onye nkasi obi dị nro. Ezi onye obula n'eme ka oburu ulo nke Mo Nso.
Mmụọ nke Mmụọ Nsọ awụpụghị n'ụwa n'oge Kraịst, n'ihi na mmehie na-ekewapụ ụmụ mmadụ n'aka Onyenwe ha. Ugwu nke ajọ omume mere dika ihe mgbochi igbochi Mo Nso site n'aka mmadu. Ma mgbe Jisos gasiri nmehie ayi site na onwu ya ma gbagoo nelu igwe ma nodu n'aka nri nke Chineke, O we zite Mo Nso nke uzo ya na Nna ya wuru ndi kwere ekwe n'ebe nile. Chineke bụ Mmụọ, ọ dịkwa ike ịnọ n'oge ọ bụla. Ya mere o puru ibu onye kwere ekwe nke nakweere mgbaghara ya maka nmehie ya site n'bara nke Kraist. Nwanna, ị natara mmụọ Chineke? Ike Kraist ọ dakwasiri gi? Bịakwute Jizọs, bụ isi mmalite nke nlọghachi na ngọzi. Ọ na-emesi gị obi ike, "Onye ọ bụla nke ga-abịakwute m, agụụ agaghị agụ ya, onye ọ bụla nke kwere na m, akpịrị agaghị akpọ ya nkụ ọzọ." Onye kwere, dika ihe edeworo n'akwukwo nso si kwuo, osimiri nke miri di ndu ga esi na ya puta na ndi ozo."
40 Ya mere ọtutu nime ìgwè madu ahu, mb͕e ha nuru okwu ndia, ha siri, Onye a bu onye-amuma. 41 Ndi ọzọ nāsi, Onye a bu Kraist ahu. Ma ufọdu siri, Gini bu Kraist ahu si na Galili puta? 42 Ọ bụ na Akwụkwọ Nsọ ekwughị na Kraịst si n'agbụrụ Devid, malitekwa na Betlehem, bụ obodo nta ebe Devid nọ? "43 Ya mere, ìgwè mmadụ malitere ịgbawa n'ihi ya. 44 Ụfọdụ n'ime ha gaara ejide ya, ma ọ dịghị onye jidere ya aka.
Ụfọdụ ndị na-ege ntị nwere mmetụta nke eziokwu ahụ n'okwu Jisọs, ma rube isi na ike ahụ. Ha kwuputara n'ihu ọha na ọ bụ onye amụma, na-amata uche Chineke na ịghọta ihe nzuzo nke obi mmadụ. Ọ bụ onye amụma a họpụtara ahọpụta kwere Mozis bụ onye ga-edu ndị Agba Ochie site na mmeri ruo mmeri na mmekọrịta ya na Chineke. N'ụzọ dị otú a ụfọdụ n'ime ha siri ike ikwupụta na onye Nazaret bụ Mesaya ahụ e kwere ná nkwa.
Otú ọ dị, echiche nke ndị Scribes katọrọ, "Ee e, ọ si Nazaret, mana Mesaịa ahụ ga-esi n'obodo Devid na nke mkpụrụ ya." Akwụkwọ a na-ezo aka n'Akwụkwọ Nsọ ziri ezi. Ntak emi Jesus mîkọfiọkke ite ke imaman enye ke Bethlehem? E nwere ihe kpatara nke a: Nke mbụ, ezinụlọ Herọd agaghị ekwe ka eze ọhụrụ si n'azụ ụlọ ha pụta. Ha dị njikere igbu ọtụtụ iri puku iji nọgide na-enwe ike. Nke abuo bu na Jisos enweghi ike ichoputa ndi mmadu site na ihe omuma ihe omuma. O hooro ịzụlite ntụkwasị obi ha site na ịhụnanya na nghọta ha banyere ọbụbụeze ya. Ntre ke enye ama ada mme mbon emi ekenimde ke akpaniko m ckpo ke idem.
Arụmụka na-etolite n'etiti ìgwè mmadụ ahụ, ha kewara n'etiti. Ụfọdụ kwupụtara na ya bụ Mesaịa ahụ ndị ọzọ jụrụ. Ndị ọrụ ụlọ nsọ ahụ guzoro site n'ịchọ ijide Jizọs; ma ebube nke eze nke okwu ya mebiri ha ma ha enweghị ike ịbịakwute ya.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-efe gị maka ịhụnanya na ịma mma gị. Ị bụ isi iyi ndụ. I kere onwe gị na anyị site n'okwukwe. I tinyewo Mmụọ gị n'ime anyị. Chi gị bụ nke anyị site n'okwukwe, anyị ndị mmehie. N'ihi na i jiriwo ọbara-gi me ka ayi di ọcha, ka ayi we di ndu rue mb͕e ebighi-ebi.
Gịnị kpatara Jizọs ji kwuo, "Ọ bụrụ na onye ọ bụla akpịrị na-akpọ nkụ ka ọ bịa bịakwute m ṅụọ?"